हृदयघातका कारण सीआइडीका एसीपी प्रद्युम्नको मृत्यु ? यस्तो छ वास्तविकता ! » Khulla Sanchar
हृदयघातका कारण सीआइडीका एसीपी प्रद्युम्नको मृत्यु ? यस्तो छ वास्तविकता !
एजेन्सी : सोनी टिभीमा प्रसारण भइरहेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो टेलिभिजन कार्यक्रम सिआइडीका प्रशंसकका लागि नराम्रो खबर छ । सीआइडीमा एसपी प्रद्युम्नको मृत्यु हुँदैछ । यो भुमिका शिवाजी शाटमले निभाइरहेका छन् । खबरलाई विश्वास गर्ने हो भने एसीपीको मृत्यु हृदयघातका कारण हुँदैछ ।
खबर पढ्दा सायद तपाईंलाई अचम्म लाग्यो होला तर खबरको वास्तविकता अर्कै छ । वास्तवमा २६ डिसेम्बरमा अन एयर हुने एपिसोडमा एसीपी प्रद्युम्नलाई हृदयघात हुँदैछ जसका कारण उक्त कार्यक्रममा उनको मृत्यु हुँदैछ अर्थात एसीपी प्रद्युम्न त्यसपछिका सिआइडीमा देखिने छैनन् । तर खबर यत्ति मात्र होइन । एसीपी प्रद्युम्नको मृत्युका साथै सिआइडीका प्रशंसकहरुका लागि अर्को नराम्रो खबर छ । सीआइडी चाँडै नै बन्द हुँदैछ ।
स्रोतका अनुसार जनवरी पहिलो हप्तासम्म मात्र उक्त कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ । एक अंग्रेजी वेबसाइटमा छापिएको खबर अनुसार प्रद्युम्नले उच्च पारिश्रमिकको माग गरेपछि उक्त श्रृङ्खला बन्द गर्नुपरेको हो । प्रद्युम्नले कार्यक्रमका निर्मातासँग अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढि पारिश्रमिकको माग गरेका छन् । उनले भनेजति रकम दिन निर्माता सक्षम नभएकोले बाध्यतावश कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपरेको बताइएको छ ।
यद्यपी, यसबारे अहिले टिभी श्रृङ्खला र च्यानलको तर्फबाट कुनै आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन ।